Baiboly pejy 31 - Ny Baiboly
Voalohany < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Manaraka Farany
Jenezy toko 49 (tohiny)
28Ireo rehetra ireo no nihavian'ny foko roa ambin'ny folon'Israely; toy izany no nolazain-drainy taminy sy nitsofany rano azy. Notsofiny rano samy araka ny tso-dranony manokana avy izy.
29Rahefa izany, izao no hafatra napetrany tamin'izy ireo: Efa hakambana any amin'ny razako aho izao, ka aleveno any amin'ny razako, anatin'ny zohy izay ao amin'ny sahan'i Efrona, Heteana; 30anatin'ny zohy amin'ny saha Makpelà, tandrifin'i Mambre, any amin'ny tany Kanaana: dia izay novidin'i Abrahama mbamin'ny saha, tamin'i Efrona, Heteana, hananany fasana ho azy. 31Tao no nandevenana an'i Abrahama sy Sarà vadiny. Tao no nandevenana an'Isaaka sy Rebekà vadiny. Ary tao no nandevenako an'i Lià. 32Tamin'ny taranak'i Heta, no nividianana ny saha mbamin'ny zohy ao aminy.
33Nony avy nametraka ny didiny tamin'ireo zanany lahy Jakoba, navonkiny teo am-parafara ny tongony dia niala aina izy, ka voangona any amin'ny razany.
Jenezy toko 50
Ny nandevenana an'i Jakoba - Ny nahafatesan'i Josefa.
1Nihohofan'i Josefa tamin'ny tavany ity rainy, ka sady nitomany teo aminy izy no nanoroka azy. 2Ary nomeny teny ny mpanao fanafody manompo azy, hanosotra zava-manitra an-drainy, ka dia nanosotra an'Israely ny mpanao fanafody. 3Efa-polo andro no nanaovan'ireo an'izany, fa izany no fetr'andro fanosoram-paty. Ary fito-polo andro no nisaonan'ny Ejipsiana azy.
4Nony tapitra ny andro nisaonany azy, dia niteny Josefa tamin'ny olona ao an-tranon'i Faraona nanao hoe: Raha mba nahita fitia teo imasonareo koa aho, dia mba lazao kely ho henon'i Faraona izao: 5Nasain'ikaky nianiana aho, nataony hoe: Indro ho faty aho, ka any amin'ny fasana nohadiko ho ahy any amin'ny tany Kanaana no handevenanao ahy. Ka mba te-hiakatra any aho handevina ny raiko ary mbola hiverina indray. 6Ary hoy ny navalin'i Faraona: Miakara àry, aleveno ny rainao, araka ny nampianianany anao.
7Dia niakatra handevina an-drainy Josefa. Niara-niakatra taminy koa ny mpanompon'i Faraona rehetra, ny loholona tao an-tranony, ny loholona rehetra tamin'ny tany Ejipta, 8ny ankohonan'i Josefa rehetra, ny rahalahiny ary ny ankohonan-drainy. Ny ankizy madinika sy ny ondry ary ny omby ihany no sisa najanony teo amin'ny tany Gesena. 9Nisy kalesy amam-pitaingin-tsoavaly maro koa, niara-niakatra taminy, ka dia be ny mpanotrona. 10Nony tonga teo am-pamoloan'i Atada ao andafin'i Jordany izy ireo dia nitomany amam-pigogogogoana mafy, fa nanokana hafitoana hanaovana fisaonana ho voninahitry ny rainy, Josefa. 11Nony nahita izany fisaonana tao am-pamoloan'i Atada izany ny Kananeana tompon-tany dia hoy izy: Endrey izany fisaonana lehibe amin'ny Ejipsiana! Izany no nanaovana ny anaran'io fitoerana an-dafin'i Jordany io hoe: Abela Mitsraïma.
12Koa dia nataon'ireo zanak'i Jakoba taminy àry izay nandidiany azy. 13Nitondra azy ho any amin'ny tany Kanaana ny zanany, dia nandevina azy ao amin'ny zohy, amin'ny sahan'i Makpela, izay novidin'i Abrahama mbamin'ny saha tamin'i Efrona, Heteana, mba hananany fasana ho azy, tandrifin'i Mambre.
14Nony vita levenana rainy dia niverina ho any Ejipta Josefa mbamin'ny rahalahiny, sy izay rehetra niara-niakatra taminy handevina an-drainy.
15Rahefa hitan'ireo rahalahin'i Josefa fa maty rainy dia hoy izy: Sao dia anaovan'i Josefa fo lentika isika, ka valiany amin'izao ny ratsy rehetra nataontsika taminy. 16Koa nampilaza tamin'i Josefa izy nanao hoe: Nanafatra rainao talohan'ny nahafatesany, 17nanao hoe: Izao no holazainareo amin'i Josefa: Avelao lahy ny heloka amam-pahotan'ireo rahalahinao, fa nahavita ratsy taminao izy. Nefa mifona aminao aho ankehitriny, avelao re ny heloky ny mpanompon'ny Andriamanitry ny rainao. Nitomany Josefa nandre izany teny izany. 18Ary ny tenan'ireo rahalahiny dia tonga niankohoka teo anatrehany nanao hoe: Mpanomponao izahay. 19Fa hoy Josefa tamin'izy ireo: Aoka tsy hanan-tahotra hianareo; fa moa solon'Andriamanitra va aho? 20Ny hanisy ratsy ahy no tao an-tsainareo; fa ny hampisy soa avy amin'izany kosa no tao an-tsain'Andriamanitra, mba hahatanteraka izao hita anio izao, mba hamonjy ny ain'ny vahoaka maro be. 21Koa aza manan-tahotra akory, fa hamelona anareo, na ny tenanareo na ny zanakareo, aho. Toy izany no nampiononany azy tamin'ny teny mankamin'ny fon'izy ireo.
22Ka dia nonina tany Ejipta Josefa, izy sy ny ankohonan-drainy. Folo amby zato taona no andro niainany. 23Nahita ny terak'i Efraima hatramin'ny taranaka fahatelo izy. Ary nisy koa zanak'i Makira zanak'i Manase izay teraka ka noraisin'i Josefa teo am-pofoany.
24Ary hoy Josefa tamin'ireo rahalahiny: Izaho ity ho faty; nefa Andriamanitra kosa dia hamangy anareo tokoa sy hampiakatra anareo avy amin'ity tany ity ho any amin'ny tany nianianany homena an'i Abrahama sy Isaaka ary Jakoba. 25Dia nasain'i Josefa nianiana koa ireo zanak'Israely, nataony hoe: Hamangy anareo tokoa Andriamanitra ka hoentinareo miakatra hiala atý ny taolako.
26Dia maty Josefa rahefa folo amby zato taona. Nohosorana zava-manitra izy, dia napetraka anaty vatam-paty tany Ejipta.
Eksaody toko 1
Fitomboan'ny zanak'Israely tany Ejipta sy fampahoriana azy.
1Izao no anaran'ny zanak'Israely tonga tany Ejipta; tonga niaraka tamin'i Jakoba izy ireo samy nombam-pianakaviany avy. 2Robena, Simeona, Livì, Jodà. 3Isakara, Zabolona, Benjamina. 4Dana, Neftalì, Gada ary Asera. 5Fito-polo izy rehetra terak'i Jakoba; ary Josefa efa tany Ejipta. 6Ary maty Josefa sy ny rahalahiny rehetra mbamin'ireo taranaka rehetra ireo. 7Maro anaka sy nitombo fatratra ny zanak'Israely, ka tonga maro be sy nahery tokoa ary nanenika ny tany.
8Fa nisy kosa mpanjaka vaovao, tsy nahalala an'i Josefa, nanjaka tamin'i Ejipta. 9Hoy izy tamin'ny vahoakany: Tonga vahoaka be sy mahery noho isika ireto, ny zanak'Israely. 10Ka handeha ataovy izay hiarovantsika tena aminy, fandrao mitombo izy; ary raha misy ady tonga tampoka, dia hikambana amin'ny fahavalo hamely antsika izy, dia hivoaka hiala amin'ny tany. 11Ka dia nanendry mpifehy hampanao fanompoana an'Israely izy, mba hamoritra azy amin'ny asa mafy; izany no nahavitana tanàna, natao fitehirizan-javatra ho an'i Faraona dia Pitaoma sy Ramsesa. 12Kanjo, araka ny namoretana azy no vao mainka nitomboany sy nihamaroany kosa, ka tonga nankahalain'ny olona ny zanak'Israely. 13Nampiasain'ny Ejipsiana an-tery vozona ny zanak'Israely, 14nampangidiny ny fiainan'izy ireo tamin'ny asa mafy dia mafy, dia tamin'ny feta, biriky, asa an-tsaha isan-karazany rehetra, izay asa nanereny azy tamin-kalozana.
15Ary ny mpanjakan'i Ejipta niteny tamin'ireo mpampivelona ny Hebrio, atao hoe Seforà ny iray, ary Foà ny iray, 16ka nanao tamin'ireo hoe: Raha mampivelona ny vehivavy Hebrio hianareo ka hitanareo eo amin'ny seza roa sosona izy, raha lahy, dia vonoy, fa raha vavy kosa, dia azo avela ho velona. 17Natahotra an'Andriamanitra anefa ireo mpampivelona, ka tsy narahiny ny tenin'ny mpanjakan'i Ejipta, fa navelany ho velona ihany ny zazalahy. 18Dia nampiantsoin'ny mpanjakan'i Ejipta ny mpampivelona ka nataony hoe: Nahoana hianareo no nanao toy izany ka navelanareo ho velona ny zazalahy?
Pejy: Voalohany < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.2887 seconds